उत्तर कोरियासँग अमेरिका किन डराउँछ ? मुख्य कारण यस्ता छन् – Makalukhabar.com
उत्तर कोरियासँग अमेरिका किन डराउँछ ? मुख्य कारण यस्ता छन्
उत्तर कोरियासँग कस्ता हतियार छन् ?
जुलाइमा उत्तर कोरियाले दुई इन्टर कन्टिनेन्टल मिसाइल परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले प्रत्यक्ष युद्धभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत उत्तर कोरियामाथि लगाम लगाउन प्रयास गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा उत्तर कोरियामाथि अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअतिरिक्त उसले चीन र रुसजस्ता उत्तर कोरियाका मित्र राष्ट्रलाई विश्वासमा लिइ तनाव कम गराउन कुटनीतिक पहल पनि थालेको छ । एजेन्सी